> Resource > Android > Music Transfer ka Computer si ay Android wirelessly
Sida caadiga ah marka aad music ka computer wareejiyo Android phone ama kiniin ah, sida Moto X, waxaad u badan tahay furaysto in cable USB in kombiyuutarka ah, in ay leeyihiin telefoonka Android ama kiniin ku xiran. Markaas, furo disk ee Android oo nuqul aad music doonayo in ay. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood cable USB ka maqan ama la jejebiyey, oo disables aad si ay u gudbiyaan music si ay Android. Ama waxaad uun ka heli daalay cable USB in aad u baahan tahay si ay u diyaariyaan mar kasta wareejinta music ah, si aad rabto in aad isku dayaan in ay sameeyaan kala iibsiga music WiFi ah.
Wax kasta oo kiiska waa, waxaan doonayaa in aan u dhahay inaysan wax adag si ay u gudbiyaan music in wirelessly Android. Waxaad u baahan tahay oo kaliya codsiga kala iibsiga music WiFi ah. The Wondershare MobileGo for Android waa codsiga noocaas ah, waxaad suuro gelin in la wareejiyo oo aanay music kombiyuutar si ay Android phone ama kiniin la lahayn cable USB.
Wirelessly wareejiyo music si ay Android in talaabooyin fudud
Hadda, dejisan iyo rakibi codsiga hoos ku kombiyuutarka.
Fiiro gaar ah: codsiga Tani waxay u ogolaaneysaa wareejinta music ka computer si HTC, Motorola, Samsung iyo telefoonada more Android iyo kiniiniyada via WiFi.
Tallaabada 1. Download & rakibi file MobileGo.apk qalabka Android aad
Ka dib markii socda codsigan, oo aad ka heli furmo suuqa sida shaashadda hoose wuxuu muujinayaa. Riix halkan Click to download furmo si ay u soo baxdo iyo rakibi file MobileGo.apk ah
Tallaabada 2. Isku qalab Android aad codsiga
On qalab Android aad, noqon WLAN ku saabsan oo ay helaan shabakad Wireless la heli karo. Tubada file MobileGo.apk ah ee aad taleefan Android ama kiniin. Lambarka sirta QR-ka muuqata suuqa kala kor ku xusan. Codsiga desktop MobileGo toos ah lagu ogaan doonaa go mobile. apk file. Marka la xidhiidha la sameeyo, telefoonka Android ama kiniin ku tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. Transfer music ka PC in wirelessly Android
Kaalay geedka buugga bidix. Riix Music . Daaqadda Music ah, guji dar si ay u muujiyaan suuqa kala file browser. Markaas, browser computer iyo dhaqaaqo music aad jeclaaday inuu aad kaniini ama Android Android via codsigan.
Marka heesaha oo u dhaqaaqay aan lagu ciyaari karo aad Android phone ama kiniin ah, codsigan ku weydiin doonaa inaad haddii aad jeceshahay in aad iyaga loogu badalo. Riix Haa iyo diinta ka bilaabmin.
Waxaad arki, taasi oo dhan oo ku saabsan sida loo kombiyuutar wareejiyo music si ay Android wirelessly. Iyadoo codsigan, waa mar dambe ma ay dhibaato in ay sameeyaan kala iibsiga music Android ka wireless. Waa maxay sababta aan kala soo bixi u leeyihiin isku day ah? Waxaan hubaa in aad ka heli doontaa qaababka badan oo dheeraad ah socodyada.